Sidee looga sameeyaa jeesjees Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo sameeyo jeesjees ah Photoshop
Lola curiel | | General, Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
Adduunyada naqshadeynta garaafka, markaan ka hadlayno jees jees waxaan u jeednaa jeesjeesyo muujinaya sida naqshad loo hirgalin doono si dhab ah. Aad ayey waxtar u leeyihiin maxaa yeelay waxay naga caawinayaan inaan ogaano haddii abuuritaankeenu runtii shaqeynayo iyo, haddii aan u shaqeyno macaamiisha, waxay ka caawineysaa inay fikrad ka helaan sida shaqada aad ku qabato taageerooyinka jireed ay u muuqan doonaan. Casharkaan waxaan kusoo bandhigayaa sida loo sameeyo shaashad Photoshop ah. In kasta oo aan u isticmaali doonno dhalo kareem ah, waxaad baran doontaa farsamooyin ku habboon nooc kasta oo shay ah.
1 Maxaad u baahan tahay inaad ku sameysid shaashad Photoshop ah?
2 Fur shaxanka majaajilada oo xulo shayga
3 Abuur lakab midab labis ah
4 Kudar calaamadee majaajiladaada
5 Dhamee jees jeeskaaga
Maxaad u baahan tahay inaad ku sameysid shaashad Photoshop ah?
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan doontaa waa a shaxan template kaas oo aan ku hirgelin doono naqshadeena, waad ka heli kartaa noocyo badan oo ka mid ah bangiyada sawirka bilaashka ah sida Pexel ama Pixaby. Maxaa intaa dheer waxaad u baahan doontaa mid shirqool in la sameeyo sumadda iyo astaan. Haddii aadan wali haysan astaantaada waxaad la tashan kartaa casharkaan sida loo sameeyo astaan ​​ku jirta Adobe Illustrator.
Fur shaxanka majaajilada oo xulo shayga
Aynu bilowno furitaanka shaxanka majaajilada. Markaas isticmaal qalabka xulashada walxaha si loo xusho dheriga kareemka. Iska ilaali inaad ka tagto halo xulashada adoo tagaya tabta "Xulitaan", "wax ka beddel", "ballaadhi" oo waxaan kordhin doonaa 2 pixels (qiyaastii).
Abuur lakab midab labis ah
Waxa xiga ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah sameyso lakab midab isku mid ahWaad samayn kartaa adiga oo gujinaya calaamadda u muuqata calaamadda sawirka kore oo aad siiso "midab isku mid ah". Maadaama aad dooratay kareemka kareemka, maaskaro si otomaatig ah ayaa loo marin doonaa lakabka leh goyntaas. Tan, waxa aan helno waa inaan bedelno midabka shayga. Si looga dhigo mid macquul ah, waxaad aadeysaa gudida ku calaamadeysan sawirka kore iyo waxaad u beddeleysaa qaabka isku-darka qadka toosan. Ugu dambeyntii hoos u dhig mugdiga lakabka midabka lebiska ilaa 75%.
Kudar calaamadee majaajiladaada
para samee summadaadaaad ubaahantahay sameyso lakab cusub oo u rogo shay caqli badan. Haddii aad laba jeer gujiso, si toos ah dariishad cusub oo dukumiinti ah ayaa ka furi doonta meesha aad wax ka bedeli karto sumaddaada si madax-bannaan. Waxa ugu horreeya ee aad sameyn doontid waa isticmaalka qalabka dalagga si loo yareeyo cabbirka shiraaca. Kadib, u jiid shaashadda shaashadda oo isku hagaaji cabirkeedaama ku habboon booska.
Iyada oo la qalab leydi adoo adeegsanaya midabka cad, waxaad abuuri doontaa a leydi ee bartanka sawirka (Waa waxa u adeegi doona summad ahaan). Markaad haysato fur astaantaada oo dhig meel u dhow cirifka bidix leydi. Ugu dambeyn, isticmaal qalabka qoraalka iyo midabka saxda ah ee astaanta in lagu qoro magaca sheyga. Baarka ikhtiyaariyada qalabka, qeybta kore ee goobta shaqada, waad wax ka beddeli kartaa astaamaha qoraalka, waxaan isticmaalay farta nabadeed waxaanan siiyay cabir dhan 130 dhibcood. Waa muhiim inaad hadda tagto tab faylka oo guji si aad u kaydiso, haddii aad dib ugu noqotid daaqadda dukumintiga ee aan shaqada ka bilownay, isbeddelada waxaa lagu dabaqi doonaa lakabka sumadda.
Dhamee jees jeeskaaga
Beddel qaabka isku darka sumadda, dooro markale 'Linear Burn', laakiin markan uma baahnid inaad taabatid boqolleyda mugdiga. Hada waa inaad hagaaji aragtida, tan awgeed waa inaad tagtaa tabta wax ka beddel "," beddelo "," deform ". Haddii aadan haysan hagayaasha firfircoon, dhagsii bidix oo ku kici iyaga «toggle guides». Waxa kaliya ee haray waa in la dhaqaajiyo gacmaha si aad ula jaanqaado calaamadda qaabka jees jeeska ah Adiguna waad heli lahayd!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo jeesjees ah Photoshop
Geli sawirka PDF
Noocyada ugu fiican xarfaha xarfaha ee naqshadahaaga